Peji 2 - 5 Kurwira michato yakazopera mukurambana - Wwe
Kuroorana michato yakaguma nekurambana
# 4 Randy Savage naMiss Elizabeth
Randy Savage naMiss Elizabeth vakarambana kumashure muna 1992
Randy Savage naMiss Elizabeth ndivo vaviri vakakurumbira muWWE muma1980. Savage naElizabeth vakave vakakurumbira paTV zvekuti kambani yakatobvumidza vaviri vacho kuti vataure muchato wavo paSummarSlam kumashure muna 1991.
Muchokwadi, vaviri ava vanga vatochata kubvira 1984, yaive inopfuura gore Miss Elizabeth asati atumidzwa semaneja mutsva waSavage paWWE TV. Savage naErizabheti vaive chikamu chenyaya dzinoverengeka dzenyaya pamwe chete kusvikira imba yavo yapera mukurambana muna 1992.
Savage naElizabeth vakaramba vachishanda pamwe chete zvichitevera kurambana kwavo, Erizabheti akaenderera mberi nekuve maneja waLex Luger. Kunze kwerin'i, Erizabheti akaenderera mberi nekuroorazve muna 1997, muchato uyu usati wapera pakurambana pasati papfuura makore maviri.
Iyo yaimbove nyeredzi yeWWE yakazoenda kuhukama naLex Luger pamberi pekufa kwake muna Chivabvu 2003.
Muna Chivabvu 2010, gore rimwe chete asati afa, Randy Savage akaroora Barbara Lynn Payne uyo akarondedzerwa semudiwa wake wekusekondari.
KUMASHURE 2/5 ZVINOTEVERA
maitiro ekuita hupenyu munzira
nhetembo pamusoro pehupenyu uye kufa kwemudiwa
Inguva yakadii yekumirira kudanana mushure mekurambana
kusangana nemumwe munhu uye kudanana
ndoziva sei kuti musikana ari mandiri